Ndụmọdụ: Budata RSS na DesdeLinux na ọnụ ya | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Mmemme, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
E nwere ụzọ dị mfe iji gụọ RSS de Site na Linux site na ọnụ anyị. Anyị kwesịrị ime iwu a:
Mana achọrọ m ịga n'ihu n'ihu, ọ bụ ya mere m ji malite ịzụlite obere ihe ọmụma m na mmemme, akwụkwọ edemede bash (nke nwere ike chọta ebe a) nke ahụ ga-enyere m aka ibudata RSS nke Post na comments. Enweghị m oge dị ukwuu (na ihe omuma) ịzụlite ya, yabụ enyemaka ọ bụla ịchọrọ inye m, m ga-enwe ekele karịa.
Echiche bụ ibudata faịlụ na RSS nke isiokwu na ikwu. Ozugbo ebudatara, site na ọkwa (with notify-bin ọ kwesịrị ịrụ ọrụ echere m) iji gosi m aha nke ohuru ndia. A na-echekwa faịlụ ndị ahụ ka ha wee nwee ike ịgụ ya ma emechaa (mgbe niile site na njikwa)Mana n'otu oge ahụ, a ga-enwerịrị ụzọ iji chọpụta ihe ọhụrụ site n'oge ruo n'oge.
N'aka ozo, ihe m choro inweta bu ihe ndia:
Ihe m chọrọ inweta bụ ihe ndị a:
Budata faịlụ ahụ .xml site n'ụzọ nke m nyeburu ya.
Ozugbo ibudatara faịlụ ahụ, chekwaa ya ma gwa m gwa-bin ka ihe atụ, aha nke ọhụrụ posts.
Ọ dabara m na m ga-echekwa faịlụ na ntinye niile na-agbakọba (iji gụọ ha ma ọ bụrụ na m chọrọ) na onye ọzọ na-egosi naanị ndị ọhụrụ, ka ha na-abata, ma na-eje ozi usoro ngosi.
Ga-enwe nhọrọ iji gụọ ma ọ bụ isiokwu, ma ọ bụ nkwupụta.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere echiche ka mma, nabata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Ndụmọdụ: Budata RSS FromLinux na ọdụ ya
N'ezie iwu ahụ na-ekwupụta-izipu, ee, ị nwere ya mgbe ị wụnye-agwa biini
Zaghachi KZKG ^ Gaara <° Linux
You nwere ike ịgwa m ebe m kwuru na iwu ahụ bụ notify-bin? Ekwuru m banyere ngwugwu na-ejikwa ọkwa, ọ bụghị iwu iji ya.
Obi udo, emeghị m ya na ebumnuche nke troll dị anya na ya 😉
Banyere elav <° Linux
Onye hụrụ egwu n'anya, ọkà mmụta sayensị kọmputa na onye hụrụ GNU / Linux n'anya, Free Software na Teknụzụ n'ozuzu ya. Onye nchịkwa Network site na ọrụ, Blogger na Designer site na ntụrụndụ.
Nke ahụ bụ obere ihe ọmụma mmemme?
Yup .. Obere ihe omuma ihe omuma. 😛
Na ọnụ ya: Newsbeuter na-agụ RSS gị site na njikwa
Mozilla mara ọkwa: "Firefox Share"